देशलाई हाँक्न पाए स्वर्ग बनाइदिन्छु : रेखा थापा | News Entertainment | Image Khabar
होमपेज / News Entertainment / देशलाई हाँक्न पाए स्वर्ग बनाइदिन्छु : रेखा थापा
देशलाई हाँक्न पाए स्वर्ग बनाइदिन्छु : रेखा थापा | Published: August 3, 2015 | सोमबार 18 साउन, 2072 | 3:16 PM | Viewed: 13298 times
नेपाली चलचित्रमा रेखा थापा सँधैजसो चर्चामा रहने पात्र हुन् । सफल नायिका, निर्मात्री हुँदै निर्देशनमा समेत उत्तिकै जम्ने प्रयासमा रहेकी रेखाले राजनीतिमा पनि चासो राख्न थालेकी छन् । उनको लक्ष्य भने राष्ट्रपति बन्नुमा केन्द्रीत छ । तर सक्रिय राजनीतिमा भने अहिले प्रवेश गर्ने बेला नभएको उनी बताउँछिन् । प्रस्तुत छ, ईमेज खबर डट कमसँग उनले गरेको राजनीतिक कुराकानीः
रेखाजी तपाईं नेपाली चलचित्रकी सुपरहिट नायिका, नाम र दाम दुबै दिएको थियो चलचित्रले, किन राजनीतिमा लाग्नु भयो ?
हरेक मानिसमा राजनीतिक चेतना हुन्छ । अझ चलचित्रकर्मीमा यो चतना बढी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । हामी महिला समानताका कुरा गर्छौं । चलचित्रमा पनि यो मुद्दालाई सबैले उठाएका छौं तर समानता कसले दिने ? समानता कसरी हुन्छ ? यी सबै कुरा राजनीतिमा अडेको हुन्छ । राज्यको नीति निर्माण तहमा नपुगेसम्म समानताका कुरा गर्नु बेकार जस्तो लाग्छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु पर्छ, त्यो क्षमता मसँग छ भनेरै राजनीतिमा लागेकी हुँ ।
जनयुद्ध लडेर आएको क्रान्तिकारी पार्टीसँग मोह जाग्नुको कारण ?
म आफैं सानैदेखि क्रान्तिकारी स्वभावको मान्छे । अन्याय, अत्याचार पटक्कै नसहने र नगर्ने । माओवादीले अन्याय र अत्याचार अन्त्यका लागि युद्ध लडेको थियो । यसकारण पनि मैले माओवादीमा राजनीति गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो ।
पार्टीमा खाशै प्रभाव त देखिएन नि ?
म जे जस्तो सोचेर माओवादीमा प्रवेश गरेकी थिएँ, त्यस्तो देखिनँ । माओवादी आफैं फुटेर टुक्राटुक्रा पनि भयो । म आफैं खिन्न पनि भएँ । मैले भूमिका खोजेको भए त दिने पनि थिए होलान् । दिन पनि खोजेका थिए, तर म अझै पूर्णकालिन् कार्यकर्ता बन्ने सोचमा छैन ।
पूर्णकालिन् राजनीति गर्ने सोच छ ?
चलचित्रबाट पूर्ण अलग्गिन त सकिदैंन तर चलचित्रमा भूमिका परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अहिलेको मेरो सम्पूर्ण समय नेपाली चलचित्रका लागि नै आवश्यक छ । यसैले पनि म पूर्णकालिन राजनीतिकर्मी हुन सक्दिन । तर पछिका दिनहरुमा त पूर्ण रुपले राजनीति नै गर्ने हो ।
अब तपाईं कुन माओवादीमा त ?
मेरो आदर्श भनेकै पुष्पकमल दाहाल हुन् । उनी जुन पार्टीमा रहन्छन्, त्यही पार्टीमा रेखा थापा रहन्छे ।
ए ! पुष्पकमल दाहाल मन परेर पो माओवादी हुनुभा’को रहेछ ?
यसलाई यसरी साँघुरो घेरामा राखेर नहेरौँ कि ! नेतृत्वको विश्वासमा अरु कार्यकर्ता पनि लाग्ने हो नि !
राजनीति गरेर कहाँसम्म पुगिन्छ जस्तो लागेको छ ?
सपना त राष्ट्रपति कै छ नि । मैले यो देशलाई हाँक्न पाए स्वर्ग बनाईदिन्छु । मसँग सोच र चिन्तन छ । म सफल नेता बन्न बन्न सक्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास यसकारण पनि छ कि– मैले बनाएका सबै चलचित्र पूर्ण सफल छन् ।
पुष्पकमल दाहालसँग कत्तिको भेटघाट हुन्छ ?
आजकल त्यति धेरै भेटघाट छैन । उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ । संविधान लेखनको चटारोमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई म आफैं डिष्टर्ब गर्दिनँ ।
पुष्पकमल सफल नेता त होइन नि ?
किन होईन ? पूर्ण सफल त म पनि भन्दिनँ तर अन्यभन्दा सफल नेता हुन् । बाठा नेता हुन् । पार्टी भित्रको गुटलाई साम्य पार्नमात्र सकेको भए २० वर्ष पुष्पकमल दाहालले यो देशमा राज गर्दथे । देश पनि स्वर्ग हुने थियो ।
माओवादीमै आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्नुहुन्छ ?
अन्य पार्टीले पनि पार्टीमा ठाउँ दिने कुरा गरेका छन् तर माओवादीमा प्रवेश गरिसकेपछि अन्य पार्टीमा चाहर्दै हिड्न चाहन्नँ । बरु पार्टीका कमजोरीलाई मैले सुल्झाउन कोशिस गर्ने छु ।
संविधान बन्छ भन्ने विश्वास छ ?
दलसँग विश्वास नगरे कोसँग गर्ने ? म पूर्ण विश्वासमा छु । संविधान दलहरुबाटै आउँछ । केही समय लम्बिन सक्ला ।
महिला हक, अधिकार र समानताका कुरा खुबै उठ्ने गर्छन्, तपाई नेपाली महिलाको अवस्थाका बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
यो पितृसत्तात्मक देश हो । पुरुषहरुबाट नेपाली महिलाले धेरै पीडा सहेका छन् । आज पनि महिलाको पीडा असाध्य छन् । यसैलाई चिर्न म आफैं पनि चलचित्रबाट सक्रिय छु । चलचित्रले मात्र न्याय, अधिकार र समानता नदिने रहेछ भन्ने बोध गरेर म राजनीतिमा लाग्ने प्रण गरेकी हुँ ।
तपाईं राजनीतिमा लागेँ भन्नु हुन्छ, पार्टीमा कुनै पदीय हैसियत नै छैन ?
मलाई केन्द्रीय समितिमा बस्न भनिएको थियो । अहिले एमाओवादीको केन्द्रीय समितिमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यत्रो जम्बो समितिमा बसेर के नै गर्न सकिन्छ र ! मैले चासो नै दिइनँ ।
अब कहिले जाने त पार्टीको पदमा ?
पख्नुस् न । चाडै आउँछ त्यो दिन । म सबै कुरा मिलाउँदै छु । रेखा त्यसै राजनीतिमा लागेकी छैन । यत्ति बुझ्नुस् ।